I-studio encinci ye-15 m2 phantsi kwemithambeka e-bellecote - I-Airbnb
I-studio encinci ye-15 m2 phantsi kwemithambeka e-bellecote
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguLyonel
I- Studette yabantu ababini emazantsi eentaba ze-15 m2 kunye nebhalkhoni.
Inekhitshi elincinci, igumbi lokuhlala elineebhedi ezimbini ezilala umntu omnye negumbi lokuhlambela elisecaleni. Kufuphi kuzo zonke izinto ezinokusetyenziswa.
Ukufikelela kwipuli akubhatalelwa, kufuneka undithumelele amagama neefani zakho kunye nedilesi yakho ye-imeyile ukuze ndikuthumelele isatifikethi esiboniswe ekwamkeleni ipuli.
Ukuphela kokucoca ngumsebenzi womntu oqeshileyo kuba andikafumani ibhinqa elicocayo neendleko, ezibonakala kwixabiso. Ndiyakucela ukuba ulumke uze ucinge ngeendwendwe eziza kufika emva kwakho ngokuzishiyela eyona flethi okanye indlu ekwicomplex icocekileyo kangangoko kunokwenzeka. Enkosi kakhulu ngokuqonda kwakho.
Kufuphi nendawo yokuhlala, kukho zonke izinto eziluncedo zokuthenga okanye ukonwaba (indawo zokutyela kunye nabanye ...). Kukho iishuttles zasimahla rhoqo ngemizuzu eyi-10 ukuya kwiziko lePlagne. Kukwakho nentlawulo yokufikelela kwindawo yokupaka iimoto zokupaka, nangona kunjalo kukho iindawo ezisimahla kufutshane neofisi yabakhenkethi. Ukunyuswa kwe-ski kukhululekile lonke ihlobo ukufikelela kwidolophana ye-plagne kwaye ebusika ukusuka kwi-5.
Umbuki zindwendwe ngu- Lyonel
Andikwazi kuhlalisa abaqeshi kuba andihlali kwindawo. Nangona kunjalo, ndihlala ndifumaneka ngefowuni ukuzama ukuphendula imibuzo yakho kwaye ndihlangabezane nako konke okulindelekileyo. Izitshixo zendlu zibekwe kumnyango wangaphambili kwibhokisi ekhuselekileyo enekhowudi. Ikhowudi yokufikelela iya kwaziswa kuwe xa ubhukisha.
Indlu ibekwe ePlagne Bellecote kwindawo yokuhlala ye-glaciers 1 kunye ne-2 yeflethi engu-608. Ukufikelela ngokuphakamisa, cofa unobumba u-G ukuya kwimigangatho yesi-6.
Andikwazi kuhlalisa abaqeshi kuba andihlali kwindawo. Nangona kunjalo, ndihlala ndifumaneka ngefowuni ukuzama ukuphendula imibuzo yakho kwaye ndihlangabezane nako konke okulindelek…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mâcot-la-Plagne